Dhismaha Mashiinka Wershada Birta ee Shiinaha H Beam steel iyo Warshadda | Ding Tai
Q69 Dhismaha Xargaha Birta Mashiinka Dabka ee Nadiifinta Weelka
1.Steel Plate Pres Line Line:
Waxaan naqshadeyn karnaa oo aan soo saari karnaa cabbir kala duwan oo qadka isu-celinta taarikada iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha. Fadlan u soo dir faahfaahintaada faahfaahinta emaylkeena.
Nooca birta xaraashka ah iyo mashiinka wax lagu buufiyo waxaa loogu talagalay oo lagu soo saaraa iyada oo la adeegsanayo qaadashada faa'iidooyinka alaabooyinka la midka ah ee laga helo gudaha dalka iyo dibedda. Qaybta nadiifinta mirqaanka leh (nadiifinta toogashada toogashada) waxay xajisaa giraangiraha qarashka sifiican u shaqeynaya iyo nooc bacaad furan oo leh nooc bacaad leh. Mashiinka dhididka wuxuu qaadanayaa burush xoog leh oo aad u sareeya oo buraashka dareerayaasha iyo hawo-qabad sarreeya. Qaybta preheheheynta iyo qalajinta waxay qaadan kartaa habab kala duwan oo kuleyl ah. Qaybta lagu buufiyo rinjiga waxay qaadataa habka buufin cadaadiska hawada-sare. Qalabka dhameystiran ee qalabka waxaa xukuma PLC, waana qalab ballaaran oo dhameystiran oo heer caalami ah.
Mashiinka rasaasta toogashada iyo xariijinta ranjiyeynta waxaa badanaa loo isticmaalaa daaweynta dusha sare (tusaale ahaan kuleylka, saarista miridhku, rinjiga rinjiga iyo qalajinta) saxan bir ah iyo qaybo dhisme oo kala duwan, iyo sidoo kale nadiifinta iyo xoojinta qaybaha qaab dhismeedka birta.
Mashiinkan waxaa si weyn loogu isticmaalaa Shipyard, warshadaha dhismaha dhismaha, warshadaha mashiinada, iwm.
Moodooyinka iyo qeexitaanka xariijinta rinjiyeynta birta ee birta:
Rar la ogolyahay
Waa maxay adeegga Antai bixin karaa?
1. Injineeradeenna ayaa si gooni ah u shaqeyn kara iyadoo loo eegayo shuruudaha qaabeynta loogu talagalay macaamiisha qalabka. una dir macmiil xaqiijin si looga caawiyo macaamiisha inay kaydinta kharashaadka.
2. Intii lagu gudajiray soo saarista qalabka, waxaan sawiray horumarka soosaarka wax soo saarka, waxaana u dirnay macaamiisha si ay ula socdaan horumarka.
3. Timaha alaabtu way baxaan, waxaan macaamiisha ugu direynaa dukumiintiyada asalka ah (sida liiska xirmada, biilka, CO, Foomka E, Foomamka A, Foom F, Foom M, B / L iwm.)
4. Waxaan macaamiisha siin karnaa sawir aasaasi ah oo Ingiriis ah oo bilaash ah, sawirro rakibo, buugaagta, buugaagta dayactirka iyo sawirada qaybo.
5. Waxaan u diri karnaa injineerkeenna rakibaadda iyo dejinta dibedda, iyo tababar lacag-la'aana oo ka shaqeeya kuwa ka shaqeeya iyo dayactirka.
6. Waxaan leenahay nidaam adeeg adeeg iib ah ka dib, Aqoonsi ayaa loo dirayaa macaamiil kasta, way geli karaan nidaamkan oo arka dhammaan macluumaadka si ay u iibsadaan qalabka iyo qaybaha ay ku iibinayaan. Waxaan bixinaa la-talin 24-saac oo khadka tooska ah ah.
1. Immisa maalmood ayaad u baahan tahay inaad soosaarto mashiinkan?
Tani waa mashiin si gaar ah loogu talagalay iyadoo loo eegayo baahidaada gaarka ah. Laga soo bilaabo injineer nashqadeynta ilaa dhameystirka wax soo saarka, Waxay ubaahantahay 45-50 maalmood.
2. Maxuu ka sameeyaa warshaddaada quseeya kantaroolka tayada?
Waxaan bixinnaa ahmiyad badan si loo xakameeyo tayada laga bilaabo bilow ilaa iyo dhamaadka soosaarka. Mashiin kasta si buuxda ayaa loo ururin doonaa oo si taxaddar leh ayaa loo tijaabinayaa ka hor intaanan la rarin
3. Waa maxay dammaanadda tayada mishiinkaagu?
Waqtiga dammaanadda tayada leh waa hal sano, waxaan dooranayaa qaybaha caanka ah ee caanka ah ee adduunka si aan mashiinka uga dhigno xaalad shaqo oofiican.
4. Miyaad awoodid inaad siiso rakibo iyo u dirid dibada? Mudo intee leeg ayay qaadanaysaa?
HAA, waxaan bixinaa adeegga dibedda, laakiin macaamiisha ayaa u baahan inay bixiyaan khidmadaha tikidhada injineerada duulimaadyada iyo cuntada hoteelada.
Mashiinka yar wuxuu badanaa qaadanayaa 5 maalmood gudahood.
Mashiinka weyn badanaa wuxuu qaataa ilaa 20 maalmood.
5. Sideen kuugu kalsoonaan karaa inaad keentid mashiinka saxda ah sidii aan ku amray?
Waxaan gabi ahaanba keeni doonnaa mashiin tayo leh sida aan uga wada hadalnay oo aan u xaqiijinay sida ay u kala horeeyaan. Aasaaska dhaqanka shirkadeena waa hal-abuurnimo, tayo, daacadnimo iyo hufnaan. Antai waa adeeg bixiyaha dahabiga ah ee 'ALIBABA' oo leh qiimeyn BV & TUV. Waad ka hubin kartaa ALIBABA, waligeen kama helin wax cabasho ah macaamiishayada.
HADDII LAGUU GARSO, PLS Fiiri HALKAN HOOSE.
Hore: Bambooyinka Shot Bift ee Tayada Sare ee Tayada Sare
Xiga: Mashiinka Buuxinta Sanduuqa Caadiga ee Golaha
Mashiinka ololka rasaasta, toogtay Mashiinka Peening, toogashada Qaybo ka mid ah Xaraashka, Shot Benty Wheel, Mashiinka Shot Benty, Shot Benty Turbine, Dhamaan Alaabada